Xeerarka bey'adda shaqada oo doodi ka taagan tahay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wakaaladda Bey'ada Shaqada. Sawirle: Pontus Hellsén
Xeerarka bey'adda shaqada oo doodi ka taagan tahay
La daabacay tisdag 12 november 2013 kl 13.35
Shirkadaha jebiya ama ku xadgudba xeerarka bey’adda goobaha shaqada waa in ay qaaali ku noqotaa oo ay bixiyaan kharash ganaax ah oo ka badan kan dowladdu soo jeedisey. Sidaas waxaa qoraal jawaab ah oo ay dowladda u dirtay ku dalbatay dalladda ururada shaqaalaha oo loo gaabiyo LO. Qoraalkaasina waxa uu la xiriiraa xeerar cusub oo ku saabsan in la kordhiyo khidamadaha ganaaxa.
Sten Gellerstedt oo ka mid ahaa dadkii qoray qoraalkaas jawaabta ah, isla markaasna khabiir ka ah dalladda ururka shaqaalaha ee LO wuxuu doonayaa matalanba in aad loo kordhiyo ganaaxa dusha laga saaro shirkadaha isticmaala waxyaalo dadka u keeni kara in kansar ku dhaco:
– Waxaan dooneynnaa in sare loo qaado heerka khidmadda ugu hooseysa, si looga hortago in shirkadaha aan sida habboon u dhaqmin in ay doorbidaan in ay bixinta kharashyada ganaaxa halkii ay ka hagaajin lahaayeen beyada shaqada.
Xeerarkaan cusub oo ku saabsan in la kordhiyo khidmadaha ganaaxa la saaro shirkadaha jebiya xeerka bey’adda shaqada waxaa xagaagii la soo dhaafay go’aan ku gaarey golaha baarlamaanka, waxayna dhaqangelayaan kowda Luulyo ee 2014. Ilaa hadda dacwooyin aad u yar oo laga soo gudbiyey xadgudubayada lagu sameeyo xeerarka bey’adda shaqada ayaa maxkamad la horkeenay, kuwa ka sii yar ayaana xukun lagu ridey. Sidaas awgeed ayuu golaha baarlamaanku go’aan ku gaarey in kormeerayaasha Wakaaladda bey’adda shaqada awood loo siiyo in ay ganaax xooggan saaraan ciddii jebisa xeerarkaas, laakiin dalladda ururada shaqaluhu waxay u aragtaa in khidmadaha ganaaxyadu ay weli aad u hooseeyaan.
Dhanka kale ururweynaha shirkadaha dhismaha oo lagu magacaabo Sveriges Byggindustrier ayaa qaba in khidmadaha ganaaxu ay hadda yihiin kuwo aad loo dareemi karo.
Waa kan Björn Samuelsson, xildhibaan xisbiga Mooderaatka u fadhiya golaha baarlamaanka oo isla markaasna ah khabiir ka hawlgala Ururweynaha shirkadaha oo arrintaan wax ka yiri:
– Shirkado badan oo ka tirsan ururweynaha shirkadaha dhismaha oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in heerarka khidmadahaas ganaaxu ay yihiin kuwo sarreeya. Run ahaantiina taasi waa dareen dhan ah. Dhanka kale waxay ayidsan yihiin in goobaha shaqadu ay noqdaan kuwo ammaan ah oo meesha laga saaro shirkadaha aan sharciga u hoggaansamin oo hawloodu ku dhisan yihiin musuqmaasuqa.
Dhibaato kale oo xeerarkaan cusub la xiriirta ayaa ah in aysan Wakaaladda bey’adda shaqadu haysan kormeerayaal ku filan oo hawlaha kormeerka fuliya. Ilaa saddexdii kormeeraba mid ayaa shaqada la cayriyey ilaa sannadkii 2006, kolkaas oo ay dowladdii talada dalka la wareegtey dhintay lacagaha maalgelinta ah oo la siin jirey Wakaaladda bey’adda shaqada. Sidaasna waxaa yiri Sten Gellerstedt oo LO khabiir uga arrimaha nolosha shaqada, hadalkiisana ku sii daray:
– Ahmiyad sidaas u sii weyn ma yeelaneyso wax ka beddelka xeerarku haddii aysan jirin cid hubisa in xeerarkaas la raacay.
Björn Samuelsson ayaa taas kaga jawaabey:
– Waxaan qabnaa in su’aashu ku xiran tahay tayada hawlaha Wakaaladda bey’adda shaqada. Waana in waxa la haysto, maal iyo muruqba, si sax loo isticmaalo, oo mar walba baaritaanada lagu sameeyo meelaha ay cilladuhu ka jiraan. Kaasi wuxuu ahaa Björn Samuelsson, xildhibaan xisbiga Mooderaatka u fadhiya golaha baarlamaanka oo isla markaasna ah khabiir ka hawlgala Ururweynaha shirkadaha dhismaha.
Weriyayaal: Zana Schiroyi iyo Abdikani Kadawo.